Autocomplete rakitra sy anaran fampirimana ao Bash amin'ny takelaka ambony na ambany. | Avy amin'ny Linux
Autocomplete rakitra sy anaran fampirimana ao Bash amin'ny takelaka ambony na ambany.
Isika izay mampiasa isan'andro ny terminal, araka ny nolazaiko tamin'ny tranga iray hafa, dia mitady fomba foana ahafahana miasa miaraka amin'ity fitaovana ity hikoriana mora foana sy araka izay azo atao. Ny entiko aminao amin'ity indray mitoraka ity, dia safidy iray izay tonga tampoka FreeNAS ary tiako be ilay izy, ka tsy maintsy nataoko Debian.
Andao hatao hoe manokatra ny terminal isika, ary hiditra ao amin'ilay fampirimana antontan-taratasy. Raha mametraka isika:
Ary tsindrio ny vakizoro ho feno feno, tsy misy zavatra mitranga, satria tsy nantsoina ilay fampirimana antontan-taratasy, Raha tsy antontan-taratasy. Ary noho izany eto no idiran'ny majia. Mamorona ny fisie izahay ~ / .inputrc:
Manokatra azy io amin'ny mpampanonta lahatsoratra ankafizinay izahay ary mametraka an'io ao anatiny:
Mamonjy sy manidy ary manokatra terminal iray izahay. Ary rehefa mametraka isika:
Ary manindry Tab izahay, hiova ho azy amin'ny anarana misy sora-baventy izy io ary hametraka antsika
Inona ny hevitrao? Ity torohevitra ity dia nampianarin'ny namako iray antsoina hoe: Matthias apitz.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Autocomplete rakitra sy anaran fampirimana ao Bash amin'ny takelaka ambony na ambany.
Fandraisana anjara tena tsara. Tsy fantany fa azo atao izany.
Mahaliana tokoa 😀
Tena tsara. Iray amin'ireo torohevitra ireo izay mampitombo ny vokatra. Tena tsara.
Valiny ho an'i Maorisy
Mahagaga! Tsara loatra ny tendron'ny elav.
izay raha ny hevitro Anarana, satria hitako io fiasa io tao FreeNAS, Tsy nisalasala nitady an'io aho satria tena mahasoa.
Tiako! Tsy haiko io fikafika io, misaotra!
Tena ilaina, Tsara
Efa nanandrana azy tao amin'ny Fedora aho saingy tsy mety amiko ary tsy misy rakitra ~ / .inputrc Napetrako Doc ary mameno ahy (toy ny amin'ny IRC) Documents fa misaotra ihany 😀
Mahaliana ny mahita ilay rakitra fikirakirana bash ao FedoraAngamba efa tonga miaraka amin'ity safidy ity amin'ny alàlan'ny default.
Mpampiasa Linux (@taregon) dia hoy izy:
Ah! ka FreeNas ... tsy maintsy miaiky ny zavatra hafa hitanao tamin'ity rafitra ity ianao. Indray andro dia hitako fa ireo mivarotra dia efa manana rafitra mifangaro amin'ny fitantanan'izy ireo, toy ny: Seagate Black Armor na QNAP NAS tena tiako ireo toetra naseho tao amin'ny pejin'izy ireo, fa Freenas .. Andao hojerentsika ny horonantsary, lazao ahy ny toetra tsara hitanao. 😉
Valiny amin'ny mpampiasa Linux (@taregon)
Voalohany indrindra, dia ny FreeBSD. 😀
ux dia hoy izy:
Valio amin'i ux
Erick Perez Esquivel dia hoy izy:
Valiny tamin'i Erick Pérez Esquivel
GO-NA-ZO! Tsy fantatro, fika ity!
Satria miresaka momba ny FreeNAS ianao, fantatrao ve ny OpenMediaVault? Izy io dia vahaolana mitovy amin'ny interface kely kokoa noho ny FreeNAS ary ny tsara indrindra dia ny tena Debian GNU / Linux, izany hoe, azonao atao ny mampiasa ny vahaolana ho NAS na miditra amin'ny rafitra ary manao # apt- mahazo fanavaozam-baovao && apt -doha fanavaozana && apt-get dist-fanavaozana ho havaozina hatrany satria ankoatry ny fampiasana ny repo ofisialy Debian, dia manampy azy manokana ho an'ireo fonosany.
OpenMediaVault Distrowatch famerenana: http://distrowatch.com/weekly.php?issue=20120423#feature
: O Tsy fantatro izy .. Amin'izao fotoana izao manamarina aho, misaotra ...
Misaotra, fa ahoana no hametrahako ny $ PS1 amin'ny fotoana anananao azy ao amin'ny terminal anao?
Soa ihany fa tsy mandray vola amin'ireto toro-hevitra tsara ireto izy ireo.
Zavatra tsara tsy nitranga. tendrony miavaka ity. Angamba tsy ho fantatro mihitsy hoe nisy izy raha tsy namangy ilay pejy ...
Iza no tsy niteny? … Andao, mandoa vola zato €… HAHAHAHAHAHA 😀 😀 😀
Ianao ihany no adala efa nandoa.
Tena ilaina, misaotra betsaka 😀
Fahagagana izany, tokony hapetraka amin'ny toerana misy anao 10 avy amin'ny 10 izy io.
Mamaly an'i Faustod
Maxi3390 dia hoy izy:
TSARA tsara 😀
Valiny tamin'i Maxi3390
Amin'ny fanovana ao amin'ity rakitra ity dia tsy avelako hifindra eo anelanelan'ny "mpampisaraka" (tsy haiko ny miantso azy ireo haha) miaraka amin'ny fanaraha-maso + havia havia / havanana. Azo vahana ve amin'ny fampidirana zavatra ao aminy?
Miarahaba sy misaotra!
Efa voavahako io, miaraka amin'ireo tsipika 2 voalohany amin'ny .inputrc avelako eto ambany 😉
Ny "\_ t": menu-complete dia ho anao hamitao azy amin'ny alàlan'ny bisikileta amin'ny TAB
Ary ilay etsy ambany dia hazavaina amin'ny fanehoan-kevitra entiny.
Switcher dia hoy izy:
Zavatra iray manampy an'io (ankoatry ny tena ilaina) dia ny aza raharahiana ny sora-baventy sy ny kely amin'ny fikarohana modely. Ohatra, raha voatanisa miaraka amin'ny ls ny rakitra ABC, raha tsy izany dia tsy raisiny ireo rakitra mifanaraka aminy ABC.
Ampio fotsiny ity manaraka ity amin'ny .bashrc:
Na ity tsipika ity amin'ny .zshrc (ho an'ireo izay mampiasa zsh):
Ny fandefasana mailaka amin'ny GPG
LDD: Voatsirika amin'ny Mac OS X ny Pear Linux